के गर्दै छन् कपिल ? – Etajakhabar
काठमाडौं – कमेडियन कपिल शर्माको कार्यक्रमको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ भने तपाईंको मनमा पक्कै प्रश्न उठेको हुनुपर्छ, अहिले उनी के गरिरहेका होलान् ?
उनको कमेडी सो बन्द भएको झन्डै ६ महिना भइसक्यो । त्यो समयमा उनले भनेका थिए कि खराब स्वास्थ्य र आफ्नो आउँदै गरेको फिल्म ‘फिरंगी’का कारण केही समयलाई ‘ब्रेक’ लिनुपर्‍यो । उनले यो पनि भनेका थिए कि छिट्टै टेलिभिजनमा फर्किनेछु ।
उनको फिल्म रिलिज भइसक्यो, स्वास्थ्य पनि ठीक भइसक्यो । तर, कपिल टेलिभिजनमा किन ‘कमब्याक’ भएका छैनन् । अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक खबर बाहिर आएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहने कपिल पछिल्ला दिन कहिलेकाहीँ मात्रै केही ट्विट गरिरहेका छन् । केही तस्बिर पनि सेयर गरेका छन् । तर, फेरि उही प्रश्न उठ्छ, आखिर उनी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् ?
यी सवालको जवाफ सायद कपिलले हालै स्न्यापच्याटमा राखेको भिडियोमा लुकेको छ । यो भिडियो उनले इन्स्टाग्राममा पनि सेयर गरेका छन् । भिडियोमा उनले निकै मजाकसाथ भनेका छन्, ‘म सोचिरहेको छु कि मेरो मुख यति गोलो किन भयो ?’
जवाफ पनि उनी स्वयंले दिएका छन् । भनेका छन्, ‘म सुन्तला धेरै खान्छु, यसकारण मेरो मुख पनि सुन्तालाजस्तै गोलो भयो ।’
अनुहार बिगारिएको भिडियोमा उनको अभिव्यक्ति सुनेर र मान्छेहरूले ठानिरहेका छन् कि कपिल ‘कमब्याक’ गर्ने तयारीमा छन् । यो अपेक्षा उनको फ्यानले गरेको पनि देखिन्छ । किनभने उनले सार्वजनिक गरेको छोटो भिडियो १३ लाखभन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् । कतिपयले कपिलको कमेडी मिस गरिरहेको कमेन्ट गरेका छन् । केहीले प्रश्न पनि गरेका छन्– टेलिभिजनमा कहिले फर्किने?
यद्यपि, कपिलले यस्ता सवालको जवाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन् । तर, उननले ‘कमब्याक’को प्रयास गरिरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको छोटो भिडियोलाई लिएर यस्तै अड्कल गरिएको छ ।
गत वर्ष सोनी इन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजनका कार्यकारी उप–प्रमुख दानिश खानले कपिल शर्मा टेलिभिजनमा छिट्टै फर्किने बताएका थिए । सो बन्द हुनुअघि केही महिना कपिल तनावमा पनि गएका थिए । कमेडियन सुनील ग्रोवरलाई जहाजमा यात्राकै क्रममा सबैसामु गाली गरेको तथा रक्सीको मातमा हंगामा गरको आरोप चर्चामा आएपछि उनी तनावमा आएका थिए । तर, उनले यस्तो आरोप खण्डन गर्दै सामान्य झगडा मात्रै भएको बताएका थिए । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
कपिल शर्मा टेलिभिजनका सफल स्टारको सूचीमा पर्छन् । उनको कमेडी सो निकै सफल हुनु नै उनी स्टार हुनुको कारण हो । सानो पर्दामा रहेर पनि ठूलो पर्दाका स्टारलाई टक्कर दिने ल्याकत राखेकैले कपिल निकै चर्चामा रहे । तर ‘कमेडी नाइट विद कपिल’को प्रसारण बन्द भएपछि टेलिभिजन दुनियाँमा निकै हल्ला चल्यो– कपिल शर्माको सोले अब पुरानो स्थान छाडिसक्यो । के अब फेरि टेलिभिजनमा फर्किए भने उनले आफ्नो पुरानो क्रेज फर्काउन सक्लान् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २६, २०७४ समय: ६:१८:५०
प्रधानमन्त्री ओली र रोबर्ट सोफियाले केकी अधिकारीको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ हेर्न जाने कुरा गरेपछि
प्रियंका कार्कीलाई एक फ्यानले धम्कीपूर्ण चिठी लेखेपछि घर नै सर्ने तयारीमा उनको परिवार, प्रहरीकै सहारा लिनुपर्ने अवस्था आयो
डा बाबुराम भट्राईबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेकी करिश्मा भन्छिन् ९ पास भएँ, पिएचडीसम्म ननस्टप पढ्छु
दिशा पटानीका प्रेमी टाइगरले देखाए सुन्दरी नायिका ऐश्वर्यासँग यस्तो काम गर्ने इच्छा, के दिशाले देलिन् त छुट ?
‘बिग बोस’मा सलमानसँगै कट्ररिना
सलमानको जमानत वारेन्ट रद्द, अब जतिबेला पनि सलमानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने